Warar - Biyaha laga cabbo biyaha badda
Biyaha laga cabbo biyaha badda
Isbedelka Cimilada iyo horumarka degdegga ah ee warshadaha adduunka iyo beeraha ayaa ka dhigay dhibaatada biyo la'aanta macaan ee sii kordheysa mid aad u daran, iyo helitaanka biyaha macaan ayaa sii kordheysa, sidaa darteed magaalooyinka xeebeed qaarkood sidoo kale biyo la'aan daran ayaa ka jirta. Dhibaatada biyaha ayaa keeneysa dalab aan horay loo arag oo ah in la macaaneeyo biyaha badda. Qalabaynta miisaanka xuubku waa nidaam ay biyaha bada ka soo galaan xuub muquun ah oo cabiran, cadaadis badan, cusbada iyo macdanta xad dhaafka ah ee ku jirta biyaha badda ayaa laga xiraa dhinaca cadaadiska sare waxaana looga miiraa biyo urursan, biyaha macaanuna way soo baxayaan dhanka cadaadiska hooseeya.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Qaranka, wadarta guud ee ilaha biyaha macaan ee Shiinaha waxay gaarayaan 2830.6billion mitir kuyuubik sanadkii 2015, taasoo ka dhigan qiyaastii 6% ilaha biyaha adduunka, oo kaalinta afraad ka gashay adduunka. Si kastaba ha noqotee, ilaha biyaha macaan ee qofkiiba waa kaliya 2,300 mitir kuyuubik, taas oo ah kaliya 1/35 celceliska adduunka, waxaana jira yaraanta kheyraadka biyaha macaan ee dabiiciga ah. Iyada oo la dardargelinayo warshadeynta iyo magaalaynta, wasakhaynta biyaha macaan ayaa inta badan ay sabab u tahay biyaha wasakhda ah ee warshadaha iyo wasakhda guryaha ee magaalooyinka. Macaaneynta biyaha badda ayaa la filayaa inay noqoto jihada ugu weyn ee lagu kabi karo biyo cabitaan tayo sare leh. Warshadaha macaanaynta biyaha bada ee Shiinaha waxay isticmaalaan xisaabaadka 2/3 wadarta guud. Laga bilaabo Diseembar 2015, mashaariicda macaanaynta biyaha badda ee 139 ayaa laga dhisay waddanka oo dhan, iyadoo wadar ahaan miisaankiisu yahay 1.0265million tan / maalintii. Biyaha warshadaha waxay gaarayaan 63.60%, biyaha la degana waxay gaarayaan 35.67%. Mashruuca macaaneyntu ee aduunku inta badan wuxuu u adeegaa biyaha guryaha la degan yahay (60%), biyaha warshadaha ayaa kaliya ah 28%
Ujeeddada muhiimka ah ee horumarinta tikniyoolajiyadda biyo-dhigista biyaha badda waa in la yareeyo kharashka hawlgalka. Isku darka kharashaadka hawlgalka, isticmaalka tamarta korontada ayaa lagu xisaabiyaa saamiga ugu badan. Yaraynta isticmaalka tamarta ayaa ah habka ugu waxtarka badan ee lagu yareeyo qarashka ku baxa macaaneynta biyaha badda.
Sifeeyaha Roorka Biyaha Nadiifinta, Ro Water Filter Qaybaha Dayactirka, Nidaamka Sifeeyaha Xirfadlaha, Naqshadeynta Nidaamka Nidaamka 'Sodium Hypochlorite', Geedi socodka macaaneynta, Biyaha Badaha Si Loo Cabbo Mashiinka Biyaha,